Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka horyimid go'aanka Maxkamadda Rafcaanka gobolka Banaadir | SAHAN ONLINE
Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka horyimid go’aanka Maxkamadda Rafcaanka gobolka Banaadir
MUQDISHO – Siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo shir jaraa’id ku qabtay xarunta xisbiga Wadajir ayaa sheegay in uusan aqbalayn go’aanka Maxkamadda Rafcaanka ee safaradda looga mamnuucay,lagu amray in la sii wado baarista dacwadiisa muddo 90 cisho ah.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sheegay in tani ay fursad la siiyay tahay Xeer Ilaalinta si ay usoo dhoob dhoobto eedeymo been abuur ah.
Waxa uu go’aanka Maxkamadda ku tilmaamay mid siyaasadeysan oo la doonayo in isaga lagu sumcad dilo lagu xakameeyo dhaqdhaqaaqiisa iyo hankiisa siyaasadeed,wuxuu cambaareeyey waxa uu ugu yeeray ciqaab wadareed loo geystay qareeno diiday in ay u doodaan.
Siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay sida Madaxda dowladda iyo garsoorka isaga indho-tireen weerarkii lagu soo qaaday xarunta xisbigooda iyo dilkii goobtaas ka dhacay.
Go’aanka Maxkamadda oo uu soo hadal qaaday ayuu ku tilmaamay mid ka dhigan in mugdi gashay sareynta sharciga,isagoona madaxda dowladda ku eedeeyay abaabulka dilal qorsheysan iyo Maxkamadeynta siyaasiyiinta mucaaradka ah.
Sidoo kale waxa uu sheegay in la gaari doono maalin lala xisaabtamo Xeer Ilaalinta iyo Madaxda dowladda Federaalka .
Ugu dambeyn,waxa uu taageerayaashiisa usoo jeediyay iney is dejiyaan ,isagoona uga mahadceliyay odayaasha dhaqanka iyo cid kasta oo gacan ka geysatay arrinkiisa.